Staff – Page 7 – Daily Som
Home»Entries posted by Staff (Page 7)
Somaliland iyo Puntland oo ka hadlay dagaalka tukaraq Mid kastana Guulo ka sheegtay
By Staff on May 15, 2018 News
Faafaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Dagaal culus oo saakay kja bilaawday Deegaanka Tukaraq ee Gobalka Sool kaas oo udhaxeeyay Ciidamo kala Taabacsan Maamulaga Puntland iyo Somaliland. Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in dagaalka uu ka dhashay khasaaro soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay. Goob jooga yaal ku sugan Magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in uu […]
Daawo Muuqaal Maxaa ku soo kordhay Dagaalka Tukaraq ee udhaxeeya Putnland iyo Somaliland
Maanulka Puntlansd ayaa ka hadlay Dagaalka Dib kaga soo cusboonaaday Gobalka Sool ee udhaxeeya Maamulada Somailand iyo Pumtland . Wasiirka Warfaafinta Puntland ayaa Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan Dagaalka Ka asiga oo sheegay in Maamulkoodu yahay Mid Nabdeed isla markaana Somaliland ay hurinayso Dagaalka. Waxaa hawada laga saaray Isgaarsiinta Gobalka Sool sida uu […]
Dowlada Maraykanka oo Laashay Qaraar ka dhan Israel oo Golaha Amaanka loo Gudbiyay
Waxaa aad usii qasmaya Xaalada Murugsan ee Magaalada Gaza iyada oo ay Dowlada Maraykanka horjoogsatay qaraar ay soo diyaarisay dowlada Kuwait oo xubin ka ah golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay kaas oo lagu doonayey in lagu cambaareeyo xasuuqa ay Israel wado Magaalada Gaza. Dowlada Maraykanka oo looga bartay waayadii ugu dambeeyay uxaglinta iyo difaacida Yahuuda […]
Xukuumada Soomaaliya ayaa waxa ay kala hadashay Xukuumada Turkiga Arimo badan oo quseeya labada, iyada oo uu maalmihii ugu dambeeyay Ra’iisul Wasaare xigeenka dalka Mahdi Maxamuud Guuleed (Khadar), uu safar shaqo ku jooga magaalada Ankara ee Caasimada dalka Turkiga. Ra’isul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed ayaa la kulmay dhiggiisa Dalkaas, Dr Recep Akdag, waxa […]
War deg deg ah Dagaal Xoogan oo Saakay dhacaya Deegaanka Tukaraq
Wararka maanta ka imaanaya Gobalka Soo gaar ahaan deeganka Tukaraq ayaa sheegaya in halkaasi uu ka socdo dagaal u dhaxeeya ciidamo kala taabacsan Maamulada Soomaaliland iyo Puntland. Warar kala duwan ee ka soo baxaya dagaalkaasi ayaa tilmaamaya in khasaaro uu soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay inkastoo aan si rasmi ah aan loo xaqiijin Karin khasaaraha […]
Sidee loo Aas-aasay Ururkii Gobanimo Doonka Soomaaliyeed ee SYL
By Staff on May 14, 2018 News
Waxaa saacadihii ugu danbeeyay sii xogaysanaya qaban qaabada Munaasabada Maalinta dhalin yarada Soomaaliyeed ee 15 may oo ku beegan Maalintii dhidibada loo taagay Ururkii Gobanimo doonka Soomaaliyeed ee SYL Sanadkii 1943. Wasaarada Dhalinyarada iyo Ciyaaraha iyo maamulka gobolka Banaadir oo iskaashanaya ayaa lagu waaa in Caawa ay magaalada Muqdisho ku qabtaan munaasabdo lagu xusayo Maalinta […]
Dagaal Khasaaro gaystay oo Dhex maray Ciidamada Somaliland iyo Puntland
Wararka ka imaanaya degaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa sheegaya in saakay Aroortii uu halkaas ka dhacay Dagaal kooban oo udhexeeya Ciidamada Maamulada Somaliland iyo Puntland. Inta la xaqiijiyey hal qof ayaa Qof ayaa ku geeriyooday 3 kala dhawac ayaa kasoo gaaray hub Xoogan oo labada dhinac ay isku adeegsadeen, inkastoo aysan jirin faahfaahin dheeraad […]
Mareykanka Oo Maanta Safaraadiisa Israel U Wareejinaya Qudus Iyo Jihaad ka dhan ah Maraykanka iyo Israel oo lagu dhawaaqay
Mareykanka ayaa maanta Safaaradii uu ku lahaa Magaalada Talabiib waxa uu u soo guurinayaa Magaalada Barakeysan ee Qudus waxaana arintan amaanay Ra’isul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu waxaana cambaareeyay oo ka soo horjeestay dadka Falastiiniyiinta kuwaa oo isku diyaarinaya dibad baxayo wa weyn. Saraakiil Mareykan ayaa ka qeyb gali doona xafaldda lagu furayo safaaradda, waxaana kamid […]
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo maalinimadii shalay ay booqasho rasmi uga bilaabatay magaalada Doxaee xarunta dalka qatar ayaa maanta kulan la qaadan doona Amiirka dalkaas Sheekh Tamiim Bin Xamad Al-Thaani. Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa xalay kulan horudhac ah ay yeesheen Wasiirka Arrimaha Dibadda Qatar oo salaan ugu yimid Hotelka uu ka degan yahay magaalada […]
Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo ka hadlay macalimiin ay qaadanayso wasaarada wax barshada
Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta sare, Mudane Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan, ayaa ka war bixiyay macalimiin ay wasaaraddu u qaadaneyso dugsiyada dhexe iyo sare dalka si sare loogu qaado heerka waxbarashada dalka. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in miisaaniyadda waxbarashada dalka sare loo qaaday sidaas darteed ay wasaraddu go’aansatay in macalimiin ay mushaarkooda bixineyso dowladdu loo shaqaaleysiiyo […]